7 Akanyanya Kushamisika Nhabvu Nhandare MuEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 7 Akanyanya Kushamisika Nhabvu Nhandare MuEurope
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 25/12/2020)
Inonakidza, kunakidza, runako, kufunga-kufunga, hapana mazwi akakwana kutsanangura iyo 7 nhandare dzinoshamisa kwazvo dzenhabvu muEurope. Uyezve, kunyangwe iwe uchifunga kuti unogona kubata hukuru hwavo, chete kana iwe uchipinda mukati, kuti unonyatsonzwisisa mashiripiti.
saka, kana iwe uri anofarira Byren Munich, izvi 7 nhandare dzenhabvu dzakakodzerwa nekutarisisa kwako uye nenzvimbo yekubwinya pane yako bhaketi rondedzero.
1. Zvinonyanya Kushamisa Bhora Nhandare MuGerman: Signal Iduna Park MuDortmund
Signal Iduna ndiyo nhandare yenhabvu huru muEurope uye inogona kuitisa 80,000 vanofarira mafeni kuseri kwegirazi rayo rinonakidza uye kupisa kwepasi. Izvi zvinokonzerwa ne 2006 kugadzirisa. yeFIFA World Cup. saka, unogona kunyatsoronga yako yebhora zororo yemitambo yechando.
Signal Iduna ndiyo yakave nhandare hombe yenhabvu kuGerman kubvira 1965, uye nhasi ndizvo kumba kuchikwata chenhabvu cheBorussia Dortmund.
How Kusvika Kune Iyo Signal Iduna Nhabvu Nhandare MuDortmund?
You can get to the stadium via Dortmund mwenje njanji njanji diki uye RB zvitima zvinobatanidza Austria neGerman.
Cologne kuenda kuDortmund Chitima Mitengo
Munich kuDortmund Chitima Mitengo
Hanover kuDortmund Chitima Mitengo
Frankfurt kuenda kuDortmund Chitima Mitengo
2. Allianz Arena: Munich, Jerimani
Iyo yechipiri pakukura nhandare yenhabvu muMunich, Allianz Arena ndeimwe yenhandare nyowani dzenhabvu muEurope. Allianz nhandare yenhabvu kuGerman yakavhurwa mukati 2005 uye wanga uri munda wemba kune FC Byren Munich nhabvu timu.
Kana iwe uchizove uri kushanyira Munich yemitambo yenhabvu, iwe unozoshamiswa nenhandare dzakazara mweya mapaneru uye ekushandura mavara ekunze. izvi 2 maficha anoita Allianz imwe yeiyo 7 nhandare dzinoshamisa kwazvo muEurope.
Nzira Yokusvika Kune Iyo Allianz Nhandare Yenhabvu MuMunich?
You can get to Allianz Stadium from Frottmaning U-Bahn station, iri pedyo.
3. Iyo Inoshamisa Kwazvo Nhabvu Nhandare MuEngland: Nhandare yeWembley
Iyo yechipiri pakukura nhandare yenhabvu muEurope, Nhandare yeWembley inogona kugamuchira 90,000 vateveri. Bhora rakakura kwazvo muUK rakavakwa mukati 2009, uye chimiro chayo chakakurumbira ndeye 134 mamita akakwirira arch, crowning the stadium. saka, iwe uchaona kuti kutarisa mitambo yeLigi Cup, uye yenyika yeligi kutamba-offs zvakaringana chiitiko chinoshamisa.
saka, Wembley haisi chete saiti yeFA yekupedzisira mukombe, asiwo nzvimbo yepakati muLondon.
Nzira Yokusvika Kune Iyo Wembley Nhabvu Nhandare MuLondon?
You should take the London Underground Circle Line from Paddington station to Baker St station and then change onto the London Underground Metropolitan Line to Wembley Paki chiteshi.
4. Iyo Inoshamisa Kwazvo Nhabvu Nhandare MuItari: San Siro Nhandare MuMilan
San Siro ndiyo nhandare yenhabvu huru muItaly. Iyi nhandare inoshamisa muMilan yakatumidzwa mukuremekedzwa kwemaviri-mukombe wepasi rose mukombe Giuseppe Meazza.
Nhandare yakavhurwa mukati 1926 uye anogona kugamuchira 35,000 vanofarira nhabvu vateveri. Chimwe chezvinhu iwe chausingakwanise kupotsa mune yayo yekunze facade itsvuku protruding girders.
Maitiro Ekuenda Kune Iyo San Siro Nhabvu Nhandare MuMilan?
San Siro nhandare yenhabvu iri 5 km kubva kuMilan pakati peguta. Iwe unogona kusvika kuSan Siro neM5 metro mutsara kubva kuMilan central.
5. Louis II Nhabvu Nhandare MuMonaco
Louis II nhandare yenhabvu ndeimwe nhandare inovhiringidza pfungwa muEurope. Nhandare ine mabheji mapfumbamwe anonakidza kumagumo epasi. Nhandare yacho inogona kuitisa 16,000 vateveri vemitambo mikuru muFrance Riviera kumashure.
mu 1979 Prince Rainier III decided to rebuild a new sports arena in the Fontvieille district. Vagadziri veParis vakatora iro rakakura basa, iyo yakaguma muna 1984, ndokuita nhandare yeLouis II imwe yenhandare dzinoyevedza kwazvo muEurope.
Nzira Yokusvikira KuLouis II Nhandare Yenhabvu MuMonaco?
Louis II nhandare yenhabvu iri 10 maawa kure nechitima kubva kuLondon.
6. Nhandare yeGroupama, Lyon
Iyi nhandare inoshamisa pane yedu 7 nhandare dzinoshamisa kwazvo dzenhabvu muEurope, inogona kugamuchira 60,000 vateveri. Pamusoro pe, imusha kuchikwata cheFrance nhabvu nhabvu yeOlympic Lyonnais uye ichagamuchira nhabvu mu 2024 Mitambo yeOlimpiki Yezhizha muParis.
saka, kana uri kuronga kushanyira Paris kuMitambo yeOlympic, iwe unofanirwa kushanyira iyi nhandare huru yenhabvu.
Sei Kusvika KuGramaama Stadium MuLyon?
Unogona enda kunhandare yeGroupama kubva kuchiteshi Decines Grand Huru yetram mutsara 3. Yakanyanya padyo nenhandare – chete 10 maminitsi’ kufamba.
7. Velodrome Stadium MuMarseille
Iyi nhandare inoshamisa muMarseille yakavhura magedhi ayo kune vateereri kumashure 1937. kubvira ipapo, Nhandare yeVelodrome inogamuchira 67,000 vateveri mwaka wese wenhabvu muFrance. Chimwe chezvinhu iwe chauchanyatsocherechedza nezve nhandare iri girazi-rakapfirirwa nedenga, izvo zvakaoma kwazvo kupotsa.
Uchashamisika, asi nhandare yeVelodrome haisi nhandare yenhabvu chete. Kwete, iyo nhandare yemitambo yakawanda, netambo yebhasikoro. nhasi, inoshanda seimba yekirabhu yeOlympique de Marseille.
Nzira Yokusvika Kune Iyo Velodrome Nhandare MuMarseille?
Nhandare yeVelodrome inenge 3.5 km kubva kuMarseilles pakati peguta. saka, unogona kusvika kunhandare ine metro mutsara 2. Iwe unogona kunyange kubata iyo metro kubva ku chiteshi chechitima kana uri parwendo mhiri Europe nechitima.
Kuenda kumutambo wenhabvu ndechimwe chezvakanakisa zvinhu zvekuita muEurope kana iwe uri anofarira nhabvu nemitambo feni. pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira iwe kuwana yakachipa pashiri ezvitima matikiti kune chero eizvi 7 nhandare dzinoshamisa kwazvo dzenhabvu muEurope.
Iwe unoda kusimbisa yedu blog positi "7 Inonyanya Kushamisa Nhabvu Nhandare MuEurope" pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Famazing-football-stadiums-europe%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)